Phumla @ Esplanade Beachfront Victor Harbor - I-Airbnb
Phumla @ Esplanade Beachfront Victor Harbor
Iiholide ezipholileyo: I-Esplanade Beachfront Victor Harbor - zibekwe kakuhle ekupheleni kwe-Esplanade eVictor Harbor. I-45 Esplanade inikezela ngephakheji epheleleyo yabantu abathandanayo okanye iintsapho. Ukubuka ulwandle kuzo zonke iziqithi, uhamba nje ngeenyawo olufutshane ukuya embindini wedolophu, iivenkile, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela kunye neemarike kunye nolwandle, udibana nebhayisekile kunye ne-IGA emnyango.
Le ndlu inemigangatho emibini inamagumbi okulala amane, iindawo ezimbini zokuhlala namagumbi okuhlambela amabini. Onke amagumbi e-QB aneengubo neefeni zesilingi. Amagumbi amathathu okulala abekwe ezantsi kwiibhedi ezinkulu ezimbini, kunye neeseti ezimbini zebhedi enye. Indawo yokuhlala engaphantsi inefriji yeziselo, iindawo zokuphumla, ithivi kunye ne-DVD. Kukho igumbi lokuhlambela elikhulu elinebhafu enethobhi nempahla eyahlukileyo. Kukho neshawa ephandle ukuze kuhlanjwe isanti kwibala elivalekileyo.
Phezulu kukho igumbi lokulala elikhulu elinebhedi enkulu, iTV, ibhedi yosuku kunye negumbi lokuhlambela elinemizila emibini. Indawo enkulu evulekileyo yokuhlala, yokutyela nekhitshi yenziwe ngenjongo yokonwabela indawo entle xa ukuyo nayiphi na indawo, mhlawumbi usebenza ekhitshini okanye wonwabele isidlo kwitafile enkulu yokutyela. Iminyango elala abantu ababini ivuleka kwibhalkoni enkulu enendawo ephandle neendawo zokoja inyama.
Ukubuka ulwandle kuzo zonke iziqithi, uhamba nje ngeenyawo olufutshane ukuya embindini wedolophu, iivenkile, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela kunye neemarike kunye nolwandle, udibana nebhayisekile kunye ne-IGA emnyango.
ekwigaraji enye elawulwa kude ngasemva endlini okanye ngqo esitratweni ngaphambili endlini.
Ukufudumeza Nokupholisa Le ndlu inenkqubo eyahlulahlukileyo yokufudumeza nokupholisa ezantsi kunye
nomjikelezo ojikiweyo wokujinga phezulu.
Ukulungiswa kwezinto zebhedi
Queensize 1 Igumbi lokulala 2: I-Queensize 1
Igumbi lokulala 3: Queensize 1
Igumbi lokulala 4: I-Bunks 2
Thumela imibuzo yakho nge-SMS, ngefowuni, nangeimeyile, kwaye siza kuyiphendula ngoko nangoko imibuzo yakho
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Victor Harbor